ဘုရင်မကြီးကုတင် Frame ကူရှင်ခေါင်းစွပ်
ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့အရေအတွက်နှင့်မြင်နိုင်ပရိဘောဂအပိုင်းအစရင်ဆိုင်နေရသည်, ထည့်သွင်းစဉ်းစားအများကြီးခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်. သေချာပါတယ်, အိပ်ရာဘောင်သည်, အမျိုးအစားများကိုအရွယ်အစားကနေပစ္စည်းအထိကုတင်အဖြစ်အများအပြားဖြစ်ကြသည်. ထို့ကြောင့်, သင်ချီတုံချတုံဖြစ်နေသည်ဟုခံစားရလျှင်မည်သည့်အရာကို ဦး စားပေးရွေးချယ်သင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အတွက်ခက်ခဲလျှင်, ဒီမိဖုရားအိပ်ရာဘောင်ကိုကူရှင်ချုပ်ထားတဲ့ headboard ကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ?
ယေဘုယျအားဖြင့်, ကျနော်တို့စဉ်းစားရန်အချိန်ယူ, မှန်ကန်သောနှင့်ကောင်းသောမွေ့ရာကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်, ကုတင်ဘောင်ကို ၀ ယ်ယူသူမည်သူမဆို၎င်း၏အရေးပါမှုကိုသဘောတူသည်. ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့အရေအတွက်နှင့်မြင်နိုင်ပရိဘောဂအပိုင်းအစရင်ဆိုင်နေရသည်, ထည့်သွင်းစဉ်းစားအများကြီးခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်. သေချာပါတယ်, အိပ်ရာဘောင်သည်, အမျိုးအစားများကိုအရွယ်အစားကနေပစ္စည်းအထိကုတင်အဖြစ်အများအပြားဖြစ်ကြသည်. ထို့ကြောင့်, သင်ချီတုံချတုံဖြစ်နေသည်ဟုခံစားရလျှင်မည်သည့်အရာကို ဦး စားပေးရွေးချယ်သင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အတွက်ခက်ခဲလျှင်, ဒီမိဖုရားအိပ်ရာဘောင်ကိုကူရှင်ချုပ်ထားတဲ့ headboard ကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ?
မိဖုရားအိပ်ရာဘောင်ကူရှင်ချုပ်ထားသော headboard သည်အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များရှိသောမည်သည့်အိပ်ခန်းတွင်မဆိုတပ်ဆင်ရမည့်ပြီးပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်. မီးခိုးရောင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကွမ်းလှမ်းပြီးအချောသပ်သောဒီဇိုင်းကြောင့်လှပပြီးအကာအကွယ်ပေးသည်. ပါးလွှာသောဘေးထွက်သံလမ်းများသည်ကြော့ရှင်း။ ကြည်လင်သောပုံသဏ္createာန်ကိုဖန်တီးပြီးဂန္ထဝင်စတုရန်းအနှံ့အပြားကူရှင်ချုပ်ထားသည်။. Row အရိုးစုသည်သင်၏မွေ့ယာကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံသည်. ပတ် ၀ န်းကျင်သစ်သားပျဉ်ပြားများသည်မွေ့ရာကိုအောက်ခြေတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်. ကြာရှည်ခံပြီးအဆင့်အတန်းမြင့်သောအိပ်ရာခြေထောက်များသည်စတိုင်လ်နှင့် ဦး စားပေးမှုအများစုနှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစပ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးသည်. ဒီအိပ်ယာဘောင်ကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သမျှသည်အခန်းတစ်ခုထဲတွင်ပါ ၀ င်သည်. သင်္ဘောတစ်စင်းထဲကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံခြုံစွာပတ်ရစ်ထားတယ်, သင့်ရဲ့ဂိုဒေါင်မှညာဘက်.
အမျိုးအစား: အိမ်သုံးပရိဘောဂ, အိပ်ခန်း
ပစ္စည်း: အထည်; သတ္တု;
function ကို: ထမင်းစားခန်းအိပ်ယာခင်း
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 137L ကို * 190W
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): 139L ကို * 192W